[Ankapobeny ] 18 Martsa, 2009 07:51
Haringana ny malagasy
Vita hatreo aloha ny tantara mikasika an'i Filoha Ravalomanana. Niala tao anatin'ny savorovoro izy ary azo lazaina fa mbola maro ihany ireo vahoaka tia azy fa tsy afamanoatra noho ny hery hananan'ny ankilany. Bye bye Ravalo hoy ny boay kely. Mbola hatsiarotsiaro ny fitondranao ihany ny vahoaka ao aorina kely ao. LOL
Manarak'izay dia araky ny tantitra nataon'ny namana rehetra eto @ blaogy dia vita izany ny tolona ka miatrika ny ho avy indray ny vahoaka malagasy izay tonga dia tsoriko oe hisedra krizy ara-panahy lehibe aloha voalohany indrindra satria hanjaka ny herisetra sy ny besandry. Dia ho avy koa ny krizy ara-tsosialy lehibe tokoa hitombo ny tsy an'asa, hiakatra ny vidim-piainana, maro ny tsy hinan-kaninana, hitombo ny asan-jiolahy izay hitondra fiadina mahery vaika tokoa.
Mafy mafy ihany ny adidy miandry ireto mpitondra tetezamita ireto. Kanefa dia safidiny io azy ny azy hotsarain'ny tantara eto isika rehetra.
Ny nahalasa saina ahy fotsiny dia nivavaka tany @ Fjkm aho t@ alahady fa avy be ny orana taty dago t@ io fotoana io ka tsy afaka nivavaka tany @ anglikana izahay telo mianaka fombanay mantsy ny mivavaka maraina be @ 6 ora sasany fa t@ io dia naleo nisafidy ny hivavaka any @ protestanta eto an-tanana ihany ka namonjy ny fidiranana t@ 10 ora izahay. Dia ity ny vakiteny novakiana tao t@ io fotoana io ary saika mifandraika @ izao vanom-potoana izao avokoa ny perikopa t@ ity taona ity hoy ny olona rehetra kanefa dia efa t@ taona lasa no natao izany fandaharana izany.
Zefania 2: 1 -3
1 MIANGòNA, eny, mivoria hianareo, Ry firenena tsy manan-kenatra [Na: tsy manina],
3 Mitadiava an'i Jehovah, hianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, Izay efa nanaraka ny fitsipiny Tadiavo ny fahamarinana, Tadiavo ny fandeferana; Angamba ho voafina hianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah.
Arak'io teny ny soratra masina io dia ho avy ny fahatezeran'Andrimanitra satria: Tia tena ny malagasy, tia vola, tia voninahitra, tia vetaveta, tia mamono olona, tia mangalatra, tia mandainga, tia mikomy,tia manompo sampy,tia mijangajanga, tia valifaty, tia korotana, tia ady, tia miteny ratsy ny fanahy masina, tia mifosa, tia manenjika, sy ny sisa... Mazava ny zavatra hitranga fa haringanina avokoa ny mpanota rehetra ary anisan'izany ny malagasy.